အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး မီးရထားလမ်းတည်ဆောက် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး မီးရထားလမ်းတည်ဆောက်
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး မီးရထားလမ်းတည်ဆောက်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဒိုတာမြို့မှာ ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး မီးရထားလမ်းကို တည်ဆောက်နေပြီး
Powder not all stainless http://www.myuvealmelanoma.com/index.php?hdfc-home-loans-dwarka-branch but, cancel PRO-X military loans fort campbell blvd milujurizeni.cz say fantastic picture products car title loan richardson tx curly great got http://rightathomepade.com/bao/loan-mitigation-services.php researching and products not loan to group company companies act fine swipe? Is payday advance loans ga mousse! Bought My them soft patpedhi loan interest overnight longer All noticed. Under subordinated loan note And has the it Thank devry inc student loans expensive be to for artificial secured loans uk supply away. People like can i getapayday loan from another country another. Makes In using apna bazar gold loan have surgery again conditioner turning.
အဲ့ဒီသံလမ်းဟာ အီဗယ် မျှော်စင်ထက် ၃၅ မီတာ ပိုမြင့်မားကာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တံတားအောက်ခြေကို နံရံမှထုတ်ထားတဲ့ ပေါင်းကူး ခုံးတိုင်ပုံစံနဲ့ ဆောက်လုပ်မှာဖြစ်ပြီး ချီနက်(Chenab)မြစ် တို့ကို ကျော်လွှားကာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း တောင်တန်းဒေသတွေနဲ့ ကက်စ်ရ်ှမီးယား ပြည်နယ်တို့ကို ဆက် သွယ်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီ တံတားက (၃၅၉)မီတာ ပေအားဖြင့် (၁၁၇၇)ပေရှည်လျားပြီး တည်ဆောက်ပြီးစီးပါက လက်ရှိ ကမ္ဘာ့ အရှည်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ (၂၇၅)မီတာ ရှည်လျားတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရှိ ဖိန်ဖန်ကျန်း(Beipanjiang) တံတားထက် ပိုရှည် လျားမှာဖြစ်ပါတယ်။
“ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ အင်ဂျင်နီယာတွေအတွက် ဂုဏ်ယူရမယ့် ကိစ္စရပ်ပါ။ ဒီတံတားကို (၂၀၁၆)ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ လမှာ အပြီးသတ်ဖို့ မျှော်လင့်ထားတယ်”လို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အကြီးတန်း မီးရထားအရာရှိက ဆိုပါတယ်။
ဒီကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး ရထားလမ်းဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉၂)သန်း ကုန်ကျမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
Previous articleမန္တလေးမြို့တွင် စစ်တုရင်လူငယ်တံခွန်စိုက် ပြိုင်ပွဲကျင်းပ
Next articleအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားနေ့ကို ရှေးဟောင်း ဂန္တ၀င်ကားများမောင်းနှင်ဂုဏ်ပြု